Stainless Simbi Pet Miti Vagadziri & Vatengesi | China Isina Stainless Simbi Pet Comb Fekitori
Yakapetwa mativi Pet Brush
Kupedza Pet Comb
Stainless Simbi Pet Kamu
Pet Paw Chipikiri Chipikiri
Imbwa Paw inosuka
Chipikiri Chipikiri Clippers
Pet Chipikiri Faira
Imbwa Collars Sunga Leashes
Gloves Mitts Massage Kugeza Chishandiso
Kushambidzika Gloves Mitts
Massage Kugeza Chishandiso
Kudzivirirwa Tooth Descaler
Pet Scissor Seta
Pet Bowl Kudya
Pet Mvura Bhodhoro
Inopindirana Pet Matoyi
Tambo Pet Matoyi
Imbwa Waste Mabhegi
Pet Bvudzi Remover
Waste Mabhegi Dispenser
Tsika Inorema Duty Retractab ...
Kuzvishambidza Kunonoka Slicker Brush ...
Heavy Duty Inodzoreka Imbwa ...
Imbwa Waste Bhegi Yekubata
Imbwa Dutu Bhegi Dispenser
Pet Groomer Kupedza Comb
Iyi peteni yekuchenesa muzamu inorema Duty, yakareruka-kurema, asi yakasimba.Iine aruminiyamu kutenderera kumashure uye Anti static yekupfeka kuitira kuti igone kudzikisira.
Muchengeti wechipfuwo anopedzisa muzinga nemazino esimbi asina kutsetseka akakomberedza, inopinda mumajasi makobvu nyore.
Uyu muridzi wechipfuwo anopedzisa muzinga ane meno akapfupika uye akapamhama Tinogona kushandisa yakafara-yakapetwa magumo kune fluffing yakakura nzvimbo, uye iyo yakatetepa-yakatsemurwa magumo enzvimbo diki.
Icho chipfu chemukati chinofanirwa kune bhegi rega rega.
Metal Pet Kupedza Kama
Iyo simbi chipfuyo yekupedzisa muzinga yakakosha iyo inogona kuchengeta chipfuwo chako chakachena uye chine hutano nekubvisa tangles, mameti, kusununguka bvudzi, uye tsvina.
Metal pet yekupedzisa muzinga haina huremu, iri nyore, uye nyore-kutakura.
iyo simbi chipfuyo kupedzisa muzinga mazino ane kusiyanisa kwakasiyana, Mhando mbiri dzekusiyana kwemazino, Nzira mbiri dzekushandisa, zviri nyore uye zvinoshanda.it inogona kupa kushambidzika kwakakwana.
Stainless Simbi Imbwa Kama
Muzinga uyu wakagadzirwa kubva pasimbi isina chinhu, inova isina ngura uye isina kupisa ngura, yakasimba, yakasimba uye isiri nyore kupaza.
2.Iyo isina simbi imbwa muzinga yakagadzirirwa neinotsvedzerera uye yakasimba dutu, iyo yakatenderera mazino imbwa muzinga haizokwenya ganda rechipfuwo uye ichapa wakasununguka kushambidzika ruzivo pasina kukuvadza chipfuwo chako, zvakare inogona zvinobudirira kudzivirira kunofambira mberi magetsi.
3.This Stainless simbi imbwa muzinga inobatsira kubvisa imbwa nekatsi tangles, mameti, yakasununguka bvudzi uye tsvina, iyo zvakare inokurudzira ganda uye inovandudza kutenderera kweropa, rakakura kupedzisa uye kupepeta bvudzi rako repanyama.
Stainless Simbi Muzinga For Pet
Muzinga wechipfuwo uyu unovakwa nesimbi isingaite.
Muzinga wesimbi isina chinhu yemhuka inokodzera ruoko zvirinani uye unogara wakasununguka kureba kupfuura mizinga yechinyakare.
Muzinga wesimbi isina tsvina wechipfuwo une meno akapamhama, akakwana kusunungura machira kana kupa chimiro chakapedzwa kujasi, zvakare inokodzera nzvimbo dziya dzinotetepa senge kumeso nemakumbo.
Simbi isina simbi muzinga yechipfuwo yakakwana kupedzisa uye kubvongodza, ichipa mudiwa wako uyo nyanzvi yakashongedzwa chitarisiko
Simbi Imbwa Simbi Comb
1.Round yakatsetseka simbi imbwa simbi muzinga mazino anogona zvirinani kudzivirira imbwa 'ganda pasina chero kukuvadza, rinobvisa tangles / mameti / akasununguka bvudzi uye tsvina, yakachengeteka pane yako dzinovaraidza ganda rinoonekera.
2.This simbi imbwa simbi muzinga yakagadzirwa nepamusoro simbi isina simbi zvinhu, kukwirira kuomarara, hapana ngura uye hapana deformation.
3.Iyo simbi imbwa simbi muzinga ine mazino mashoma uye mazino akaomarara. Iwo mazino mashoma anogona kushandiswa kugadzira vhudzi rembwa nekatsi, uye akasungirirwa bvudzi mapfundo anogona kutsetsenurwa nyore nyore neiyo gobvu chikamu.
Simbi Imbwa Kushambidzika Comb
1.Iyo simbi yekugadzirisa imbwa muzinga yakakwana yekutsanangura zvakapfava nzvimbo dzehuswa dzakatenderedza kumeso nemakumbo, uye kuyamura yakasunganidzwa yemvere dzakakomberedza nzvimbo dzemuviri.
2.Simbi yekugezesa imbwa muzinga musanganiswa unokosha unogona kuchengeta chipfuwo chako chakachena uye chine hutano nekubvisa tangles, mameti, bvudzi rakasununguka, uye tsvina, zvinosiya bvudzi rake rakanaka kwazvo uye rakapfava.
3.Ichiyero chisina kuremerwa chekushomeka-kusaneta. Iyi mhedzisiro inofanirwa-kunge iine simbi imbwa yekushongedza muzinga kubatsira kuchengetedza imbwa ine undercoats. Smooth yakakomberedzwa mazino mizinga yekuzadza kushambidzika. Mazino ane kutenderera kumagumo zvinyoro nyoro uye nekumutsa ganda remhuka yako kuti riite riine hutano jasi.
Kero:Kwete. 8 Nanguandu mugwagwa, Yuexi Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu China